यसकारण एनएसएल जित्ने काठमाडौं रेजर्सका एउटा पनि खेलाडी किन राष्ट्रिय टिममा परेनन् , कोचले दिए कडा जवाफ ( हेर्नुस भिडियो ) - TajaKhabarTV
यसकारण एनएसएल जित्ने काठमाडौं रेजर्सका एउटा पनि खेलाडी किन राष्ट्रिय टिममा परेनन् , कोचले दिए कडा जवाफ ( हेर्नुस भिडियो )
२०७८, ७ जेष्ठ शुक्रबार १२:५३ May 22, 2021 ताजा खबरFeatured, खेलकुद
काठमाडौं । प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले मंगलबार फिफा विश्वकप छनोट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरे । अलमुताइरीले राष्ट्रिय टोलीमा ठुलो फेरबदल गरेपछि सबै चकित परेका थिए । उनले घोषणा गरेको २३ खेलाडीमा राष्ट्रिय टोलीका नियमित सदस्य भरत खवास, रन्जित धिमाल, रवि पासवान, अमित तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बे जस्ता खेलाडी अटाउन सकेनन् । त्यस्तै पहिलो नेपाल सुपर लिग बिजेता टिम काठमाडौं रेन्जर्सका एउटा पनि खेलाडी टिममा परेनन् ।
आखिर अब्दुल्लाह अलमुताइरी किन युवा खेलाडीलाई छनोट गरे ? किन स्टार खेलाडीलाई टिमबाट बाहिर पठाए ? त्यस्तै एनएसएल जित्ने काठमाडौं रेन्जर्सका एउटा पनि खेलाडी किन राष्ट्रिय टिममा परेनन् ? यी सबै प्रश्नको जवाफ उनले दिएका छन् ।
आउनुस अब्दुल्लाह अलमुताइरी भनाई पढ्नुस ।
प्रतियोगिताका लागि तयारी राम्रो भइरहेको छ । एनएसएलपछि खेलाडी धेरै नै थाकेका छन् । खेलाडी ‘रिकभर’ हुन समय लाग्नेछ । आशा छ कि विश्वकप छनोटअघि खेलाडीहरू फिट भइसक्नेछन् । मलाई धेरैले यो खेलाडी किन छैन, त्यो खेलाडी किन परेन भनेर सोधिरहेका छन् । त्यसमध्ये रवि पासवानको बारेमा धेरैले सोधेका छन् । तर, उनलाई क्रस कसरी गर्ने भनेर कसैले सिकाएको छ ? छैन । उनलाई बल लिएर अघि बढ्ने भन्ने मात्रै सिकाएको छ । ऊ बल लिएर अघि बढ्छ, तर त्यसपछि उसले के गर्छ ? उसैलाई थाहा छैन । अहिले उसले धेरै कुरा सिक्दै छ ।
हामीसँग धेरै राम्रा खेलाडी छन् । तर, उनीहरूलाई अहिले आफू कहाँ छु । कसरी खेल्नुपर्छ भनेर थाहा छैन । अहिले उनीहरूले त्यसको समीक्षा गर्न थालेका छन् । उनीहरूले अहिले निकै कडा मिहिनेत गरिरहेको देखेको छु । धेरैले काठमाडौं रेजर्सका खेलाडी लिएन भनिरहेका छन् । मसँग काठमाडौं रेजर्ससँग कुनै दुस्मनी छैन । म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु ।
तर, मैले काठमाडौंबाट किन खेलाडी छनोट गरिनँ भनेर सत्य कुरा भन्छु । विकेश कुथु धेरै थकित छन् । यस्तो समय उनलाई लिने हो भने उनले अनावश्यक गल्ती गर्न सक्छन् । तेज तामाङले हातको औँला भाँचेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई टोलीमा लिँदा थप कुनै क्षति भयो भने ? यस्तै, संजोगसँग लिगामेन्टको समस्या छ । यदि, उनले एक महिनासम्म यसरी नै खेल्ने हो भने त्यसपछि भविष्यमा फेरि फुटबल खेल्न सक्दैनन् । उनलाई अहिले आराम चाहिएको छ ।
अर्का खेलाडी हुन्, मेरो ‘फेभरेट’ लेफ्ट ब्याक विश्वास श्रेष्ठ । यदि, तपाईंले विराटनगर र काठमाडौंबीचको खेल हेर्नुभयो भने ५०औँ मिनेटमा विराटनगरका प्रशिक्षकले उनलाई बल दिएका छन् । तर, उसले प्रशिक्षकतर्फ नै बल फ्याँके र प्रशिक्षक उभिएकै मुनि रहेको पानीको बोतल टिपे । त्यसपछि मैले उनलाई कारबाही गर्छु भनेको थिएँ । यदि कसैले गल्ती गर्छ भने उसले त्यसको सजायँ पाउनुपर्छ । यो सबैका लागि स्पष्ट हुनुपर्छ । तपाईंले नेपालका लागि खेल्ने हो ।
नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो । त्यसबाहेक अरू कुराको ख्याल गर्दिनँ । ललितपुरका रक्षक निरज बस्नेतलाई पनि मैले भनेको छु कि यदि तिमी वार्मअपको समय गम्भीर बन्न सकेनौ भने कहिल्यै बन्न सक्दैनौ । त्यसैले आगामी जुलाईसम्म परिवर्तन भएर देखाउनुपर्छ भनेको छु । जुलाईमा फेरि भेट हुँदा जो पनि आउनेछन् उनीहरू सबैले यो नियम थाहा पाउनुपर्नेछ । त्यसैले कृपया खेलाडीलाई समर्थन गर्नुहोस् । तीन महिना कुर्नुहोस् । मलाई त्योभन्दा बढी समय चाहिँदैन । त्यसपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला ।